Aung Myay Saytanar General Services မြန်မာအိမ်ခြံမြေ ၀က်ဘ်ဆိုက် | ShweProperty.com
Aung Myay Saytanar General Services
095080073,09422888852, 09422888853, 09422888894
NO.(888), Room-3B, 2Floor,Myittar Road , 10 Ward,South Okkalapa Township,Yangon.09 5080073 , 09 422888852 , 09 422888853.
About Aung Myay Saytanar General Services
Aung Myay Saytanar Co.,Ltd.
တိုက်၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ဂိုဒေါင်၊ ဆိုင်ခန်း၊ ရောင်း၊ ၀ယ်၊ ငှားရမ်းခြင်း။
တိုက်၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ပိုင်ဆိုင်မှု မှန်ကန်ခြင်း ရှိ။မရှိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
မြေပုံ ကူးခြင်း၊ မြေကွက် ခွဲစိတ်ခြင်း၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အမည်ပြောင်းခြင်း။
ဥပဒေနှင့်အညီ စာချုပ်စာတမ်း အမျိုးမျိုး ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အကြံပြုခြင်း။
အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ အထွေထွေ ကိုယ်စာလှယ်လွှဲစာ ပြုလုပ်ခြင်း။
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အရောင်းအ၀ယ် ဈေးကွက်ပေါ်မှုတည်၍ အကြံပြုဆွေးနွေးပေးခြင်း။
(နွေးထွေးသောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် Aung Myay Saytanar General Service Co.,Ltd.
Aung Myay Saytanar General Services ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
ရောင်းရန် - ရမ်ကင်းမြို့နယ် | ဘောက်ထော် (65×95) အကျယ်ရှိ မြေကွက်အား အမြန်ရောင်းလိုပါသည်။
ခြံ ၊ မြေကွက်ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဝီစီတွင်း,ရေ+မီး...Advertised by Ko Su…
6,500 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 6175 sqft00
ရမ်ကင်းမြို့နယ် | ဘောက်ထော် (65×95) အကျယ်ရှိ မြေကွက်အား အမြန်ရောင်းလိုပါသည်။
ဧရိယာ : 6175 sqft
Asking Price : 6,500 သိန်း
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ်| အာရှတော်ဝင်အန (38×60) အကျယ်ရှိ မြေကွက်အား ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် အမြန်ရောင်းပါမည်။
ခြံ ၊ မြေကွက်စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရေ+မီး...Advertised by Ko Su…
7,700 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 2280 sqft00
စမ်းချောင်းမြို့နယ်| အာရှတော်ဝင်အန (38×60) အကျယ်ရှိ မြေကွက်အား ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် အမြန်ရောင်းပါမည်။
ဧရိယာ : 2280 sqft
Asking Price : 7,700 သိန်း
ငှားရန် - ရန်ကင်းမြို့နယ်|ကံဘဲ့လမ်းမပေါ် (30×60) အကျယ်ရှိ 1RC အားအမြန်ငှားပါမည်။
လုံးချင်းအိမ်ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးHall…...Advertised by Ko Su…
18 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1800 sqft00
ရန်ကင်းမြို့နယ်|ကံဘဲ့လမ်းမပေါ် (30×60) အကျယ်ရှိ 1RC အားအမြန်ငှားပါမည်။
ရောင်းရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ်|၅ ရပ်ကွက် ကျောက်ရေတွင်း (30×90) အကျယ်ရှိ မြေကွက်အားအမြန်ရောင်းပါမည်။
ခြံ ၊ မြေကွက်မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး...Advertised by Ko Su…
1,950 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 2700 sqft00
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်|၅ ရပ်ကွက် ကျောက်ရေတွင်း (30×90) အကျယ်ရှိ မြေကွက်အားအမြန်ရောင်းပါမည်။
Asking Price : 1,950 သိန်း
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမတွင် (84'× 60 ') အကျယ်ရှိ (ပါမစ်) မြေကွက်အား အမြန်ရောင်းမည်။
ခြံ ၊ မြေကွက်ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး...Advertised by Ko Su…
2,550 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 5040 sqft00
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမတွင် (84'× 60 ') အကျယ်ရှိ (ပါမစ်) မြေကွက်အား အမြန်ရောင်းမည်။
ဧရိယာ : 5040 sqft
Asking Price : 2,550 သိန်း
ရောင်းရန် - အလုံ River View Point Condo ​တိုက်​ခန်း​ရောင်းရန်​
ကွန်ဒိုအလုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးMaster…...Advertised by Ko Su…
3,500 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1900 sqft30
အလုံ River View Point Condo ​တိုက်​ခန်း​ရောင်းရန်​
ဧရိယာ : 1900 sqft
ငှားရန် - စံပယ်​ဖြူ - ကွန်​ဒို
ကွန်ဒိုသင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,ဂျိုးဖြုရေ,Master…...Advertised by Ko Su…
13 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1550 sqft22
စံပယ်​ဖြူ - ကွန်​ဒို
ရောင်းရန် - ဆရာစံကွန်ဒို
ကွန်ဒိုဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,ဂျိုးဖြုရေ,Master…...Advertised by Ko Su…
2,550 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1680 sqft32
ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ သံလွင်လမ်းတွင် (မြေပိုင်)မြေကွက်အား လျှော့ဈေးဖြင့် အမြန်ရောင်းမည်။
ခြံ ၊ မြေကွက်ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး...Advertised by Ko Su…
13,000 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 5950 sqft00
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ သံလွင်လမ်းတွင် (မြေပိုင်)မြေကွက်အား လျှော့ဈေးဖြင့် အမြန်ရောင်းမည်။
ရောင်းရန် - MMM Condo
ကွန်ဒိုအလုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master…...Advertised by Ko Su…
2,400 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 2100 sqft33
ရောင်းရန် - Orchid Condo
ကွန်ဒိုအလုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,ဂျိုးဖြုရေ,Master…...Advertised by Ko Su…
2,300 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1800 sqft34
ရောင်းရန် - ရန်ကင်း၊ ကျောက်ကုန်း-ကန်ဘဲ့လမ်းမ အနီးရှိ (၃) ထပ်လုံးချင်းတိုက်အား အမြန်ရောင်းရန်။
လုံးချင်းအိမ်ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ကြွေခင်း,ဂျိုးဖြုရေ,လျှာထိုးခင်း,Master…...Advertised by Ko Su…
10,000 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 4500 sqft66
ရန်ကင်း၊ ကျောက်ကုန်း-ကန်ဘဲ့လမ်းမ အနီးရှိ (၃) ထပ်လုံးချင်းတိုက်အား အမြန်ရောင်းရန်။
ဧရိယာ : 4500 sqft
ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမ​ပေါ်ရှိ Royal Sin Min Condo တွင် (၁၉၀၀) စတုရန်းပေ အကျယ်ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အ​ခန်းအားအမြန်​ရောင်းမည်​
ကွန်ဒိုကြည့်မြင်တိုင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ကြွေခင်း,ပါကေးခင်း,Master…...Advertised by Ko Su…
4,000 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1900 sqft33
ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းမ​ပေါ်ရှိ Royal Sin Min Condo တွင် (၁၉၀၀) စတုရန်းပေ အကျယ်ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အ​ခန်းအားအမြန်​ရောင်းမည်​
ရောင်းရန် - အလုံမြို့နယ် အလုံလမ်း 99Condo ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
2,700 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1800 sqft33
အလုံမြို့နယ် အလုံလမ်း 99Condo ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
ရောင်းရန် - အလုံမြ်ို့နယ် နှင်းဆီကုန်းလမ်းရှိ် အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုခန်းသန့်သန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
အလုံမြ်ို့နယ် နှင်းဆီကုန်းလမ်းရှိ် အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုခန်းသန့်သန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
ရောင်းရန် - အလုံမြို့နယ် အလုံကမ်းနားလမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော MMM-Condo ရှိ အခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
2,600 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 2100 sqft11
အလုံမြို့နယ် အလုံကမ်းနားလမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော MMM-Condo ရှိ အခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
ရောင်းရန် - အလုံမြို့နယ် အလုံလမ်း Orchid Condo ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
3,000 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1800 sqft33
အလုံမြို့နယ် အလုံလမ်း Orchid Condo ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင်​ ကမ်းနားလမ်းမ​ပေါ်ရှိ Royal Sin Min Condo တွင် ( ၁၆၀၀) စတုရန်းပေ အကျ ယ်ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်​ခန်းအမြန်​ရောင်းမည်​
ကွန်ဒိုကြည့်မြင်တိုင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master…...Advertised by Ko Su…
3,200 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1600 sqft33
ကြည့်မြင်တိုင်​ ကမ်းနားလမ်းမ​ပေါ်ရှိ Royal Sin Min Condo တွင် ( ၁၆၀၀) စတုရန်းပေ အကျ ယ်ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်​ခန်းအမြန်​ရောင်းမည်​
ရောင်းရန် - အလုံမြို့နယ် နှင်းဆီကုန်းလမ်းရှိ 99 Residence Condo ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
2,550 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1700 sqft33
အလုံမြို့နယ် နှင်းဆီကုန်းလမ်းရှိ 99 Residence Condo ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
ရောင်းရန် - အလုံမြို့နယ် အလုံကမ်းနားလမ်း Orchid Condo ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းသန့်သန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
2,300 သိန်း(ညှိနှိုင်း)ဧရိယာ : 1760 sqft33
အလုံမြို့နယ် အလုံကမ်းနားလမ်း Orchid Condo ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းသန့်သန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
ဧရိယာ : 1760 sqft